Izincomo nokugcina umbono omuhle. Amavithamini for umbono
Ikhono ukubona ngokucacile abantu emhlabeni kalula. Kodwa kwenzekani uma kulahleka ezempilo, kanye nokuthi ungakuthinta kanjani? Kulesi sihloko sizohlola ezinye izincomo ukuze kulondolozwe umbono omuhle futhi uchungechunge ewusizo umzimba zamehlo.
Yini enquma impilo iso?
umbono Good - kuyisihluthulelo ukuphila okunethezekile ngaphandle okuzosibambelela. Ngokubukeka, umuntu ubona u-90% inani, futhi lokhu kuwubufakazi onohlonze uma kuziwa unakekelwe amehlo.
Ukuze hhayi ukulahlekelwa ikhono lokubona "izinto njengoba zinjalo" kuyadingeka ukuze bagcine ezinye izincomo nokugcina umbono omuhle:
ukusetshenziswa izibuko ngokukhethekile isikhathi solar - kuba isakhi ledzingekako iso inhlanzeko. UV ukukhanya Ingasheshisa ukuthuthukiswa pathologies ezifana ulwelwesi esweni futhi ukonakala kwanoma kwezicubu. Ngaphezu kwalokho, elangeni ngokweqile kwenza abantu bakuphathe umonakalo corneal;
imikhuba eyingozi (isib ukubhema) kwandisa ingozi yokungenwa ukulimala cornea iso futhi efanayo UV ngemisebe kungabangela izinqubo esiwohlozayo. Abantu egazini nicotine abakwazi asiqonde ngokugcwele wonke umsoco, futhi emehlweni sokubuyiselwa cishe akunakwenzeka;
ekuzileni utshwala - lokhu kuyisinyathelo esifanelekile uqinisekile maqondana okunakekela iso yabo. Abantu ababeka ukuphuza utshwala, kuncike ukuthuthukiswa ezomile iso syndrome. esiningi utshwala kuholela emboli anobuthi, kanye kokunikezwa kwe-nerve optic;
Sidinga ukuqapha ezingeni likashukela egazini. Umbono engcono umuntu uyoba lapho kunciphisa ukusetshenziswa ukudla okunoshukela kanye carbohydrate-ocebile, kanye ukwenqaba iziphuzo, aqukethe nodayi. Ushukela iyehla iyenyuka Ingabangela izinguquko sokugembula e-lens iso, ngakho njalo bayohlolwa nguchwepheshe kungavimbela izifo;
yansuku zonke kufanele udle ukudla okunothile Antioxidants ne-zinc. Futhi opticians belulekwa ukukufaka ekudleni amavithamini. The best lolu hlobo imali - kungcono ngamavithamini A no-okunamafutha acid Omega-3.
Amacebiso okungenhla kuyokusiza ekuvimbeleni ukukhubazeka elihlobene ne-amehlo. Izincomo nokugcina umbono omuhle ezifanele nganoma yisiphi bobunye ubudala kungakhathaliseki ubulili.
Yini enye edingekayo ukuze amehlo okunempilo?
Ngaphezu ngendlela enempilo neluhlolo njalo nguchwepheshe e isidingo ukusebenzisa Vitamin yokudla njengoba nokuvinjelwa pathologies. Kusho ukuthini?
Njalo umzimba wabantu udinga izakhi mkhondo ezithile futhi izinto sandla ekutfutfukisweni evamile. Amehlo yena, uyoba amavithamini wusizo umbono. izidakamizwa Iningi zingahlukaniswa zibe amaqembu amaningana ngokuvumelana nohlobo umthelela nemisebenzi okuzivuselela.
amavithamini B ngenxa yokulondoloza umbono
Ngiyazisebenza umuntu emini lapho imikhiqizo efanele inhlanganisela Kusizuzisa on ukuthuthukisa izindwangu, kuthuthukisa ukusabela okuvikela umzimba, ukuze ashukumise izivikeli mzimba.
Ukubuyisela umbono kuyadingeka uma kukhona ukuntuleka kwamavithamini ezithile. Ukuze ugweme lokhu, ochwepheshe batusa usuku zihlanganisa ukudla yakho Ukudla aqukethe izingxenye ezilandelayo:
Vitamin A: ukwazi ukuvimbela izinqubo esiwohlozayo ezicutshini eziningi iso, futhi kakhulu ngcono acuity ezibukwayo;
U-vitamin C: Lena ingxenye ezidingekile cishe njalo ekwakhekeni nasekumeni komzimba, futhi amehlo nabo bayajabula. Vitamin Kwethulwa ngesivinini umzimba, ukuvimbela yokujama tsi uketshezi emzimbeni ngakhoke kwandisa ikhono kwezicubu microcirculatory uthinta inhlamvu yeso;
Vitamin E: ukwazi ukuvimbela pathologies ezifana myopia futhi turbidity;
Vitamin D: kakhulu ngcono ukusebenza emsipheni optic futhi retards ijwabu ukuguga.
Vitamin eyinkimbinkimbi kanye nayo izakhi mkhondo ewusizo - lokhu kuyisinyathelo sokuqala endleleni eya impilo iso lakho.
izakhi Trace ezidingekile umbono omuhle
Izincomo nokugcina umbono omuhle ziqukethe ezinye amacebiso awusizo ngezindlela ukusetshenziswa izakhi trace. Lesi sakamuva abaluleke kakhulu hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa amehlo kodwa futhi impilo yonke umzimba.
Potassium usendaweni yokuqala phakathi amaphuzu asemqoka adingekayo ukuze silondoloze umbono omuhle, kanye ukulinganisela ibhalansi acid-ane-alikhali.
Isici trace ezifana ne-calcium, kwenza ukusebenza eqeda ukuvuvukala, futhi bahlanganiswa ukwakheka kwamangqamuzana ketshezi kanye ijwabu.
Zinc kanye selenium ngokulinganayo adingekayo ukuze oxygenation kwezitho mbono. Lezi izakhi mkhondo ukusekela ukusebenza evamile iso futhi izakhiwo ezizungezile kubo.
Ngezinye eside besebenza ngesikhathi computer noma ngokufunda amehlo isikhathi eside kudingeka aphumule. indlela eyanele oyosusa iso ukukhathala, kuyoba izivivinyo ezilandelayo:
eyingqabavu eshaywa ngeminithi elilodwa;
fixing we eduze ngale ndaba, ngesikhathi kude;
esigcwele apula uphendulela udvweba umugca locondzile okuphambene nalokho;
squinting iso eqinile, kulandele aziphumulele.
Lezi umzimba zisiza kakhulu futhi abulawe yabo evamile kungavimbela pathologies eziningi ezihlobene nerve futhi yeso.
Imithetho umbono omuhle ngeke akwenze ngaphandle uhlu imikhiqizo ezokwenza engcono kabi impilo amehlo:
izaqathe angathuthukisa acuity ezibukwayo futhi isekela umzimba. Lokhu kwenzeka ngenxa khona inani elikhulu carotene;
isipinashi Ukugunda kakhulu uma uqala izinkinga iso ngoba iqukethe lutein - mineral trace ezidingekile ukuze uvimbele amanzi emzimbeni futhi ukubhujiswa yeso;
bodumo rosehip okuqukethwe okusezingeni eliphezulu vitamin C kanye liyadingeka ukusetshenziswa njalo;
Apricot yakhiwa iqembu A amavithamini, okuyizinto ingxenye ebalulekile umbono omuhle.
Ukudla ngokufanele, umsebenzi kanye nokusebenza ngendlela efanele kuyokusiza ukuba ulondoloze umbono hhayi kuphela, kodwa futhi impilo kanye ngobusha.
Uma ingane yakho ine-iso evuvukele - ungalibali!
I-glaucoma - Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela
Bioclear (lens) - ingabe ukuthengwa?
Izincomo sendlela ukukhetha izibuko
Strabismus: Izimbangela, Izimpawu, Sifo Nokuselapha
Contact lens Freshlook Ubukhulu: Izibuyekezo
Indlela yokusebenzisa hamachi futhi ziyini?
Ukulungiselela sokubelethisa. Kokubeletha Chamber: ukuthi baziphathe kanjani?
Kungani nezinkanyezi kukhanya: physics noma yokuthakwa kwamakhemikhali?
Izimbali ukuthosa, kuyafana - izibani, bona - globeflower
Anton laseChekhov "Intulo" namaqhawe alo
Yini basuke eziphothene Wire Mesh
Okuhlobisa zasendlini izitshalo leef: izinhlobo Qalat
Ipilisi yokukhulelwa i-Regulon. Imiyalo yokusetshenziswa